अर्को अस्ट्रेलिया काण्ड : श्रीमति नै भिलेन बनेपछि सन्तोषले यो जे खेप्न बाध्य भए ! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > अर्को अस्ट्रेलिया काण्ड : श्रीमति नै भिलेन बनेपछि सन्तोषले यो जे खेप्न बाध्य भए !
अर्को अस्ट्रेलिया काण्ड : श्रीमति नै भिलेन बनेपछि सन्तोषले यो जे खेप्न बाध्य भए !
admin January 27, 2020 Uncategorized	0
उच्च शिक्षाका लागि वा जागिरका लागि अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत पश्चिमा देशमा जाने नेपालीहरुको का ण्ड समयसमयमा भाइरल हुने गर्दछ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अस्ट्रेलिया काण्डका नाममा एउटा भिडियो खुबै भाइरल भयो । यी देशहरुमा कतिपय नेपालीका घ ट्ना क्रमले हाम्रो सामाजिक मर्यादा नाघेको पाइन्छ । विदेश गएपछि एकाएक पश्चिमा संस्कृतिमा रमाउने र आफूलाई त्यही रुपमा ढाल्न खोज्ने केही युवा युवतीहरुको प्रवृत्तिले नेपाली समाजमा ठुलो भुकम्प ल्याएको छ ।
पछिल्ला केही घट्नाक्रम नियाल्ने हो भने पनि यस खालका कुराहरु देख्न पाइन्छ । दाङमा दबङ शैलीमा हिँड्ने युवा सन्तोष (नाम परिवर्तन) ले फिल्मी शैलीमै प्रेम विवाह गरे । बिहेपछि बिक्कीले श्रीमतीलाई अस्ट्रेलिया पढाउने र आफू पनि डिपेन्डेन्टमा जाने सोच बनाए । अस्ट्रेलिया गएर काम पनि सुरू गरे । यसै क्रममा श्रीमतीलाई नर्सिङ पढाउन दिनरात दुःख गर्न थाले । सन्तोष नेपाल हुँदा पनि काममा जोशिला थिए । एक दिन श्रीमतीले नेपालमा भएका आफ्ना बाबुआमालाई भेट्नु भन्दै सन्तोषलाई नेपाल फिर्ता पठाइन् ।
करिब एक महिना नेपाल बसेर फर्कने क्रममा सन्तोषलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन विभागले रोक्यो र भन्यो ‘तिम्रो भिसा रद्द भइसक्यो २०२२ अगष्टसम्मको भिसा बोकेर नेपाल गएका सन्तोषलाई के थाहा, श्रीमती नै ‘भिलेन’ हुन्छिन् भन्ने कुरा । नेपाल आउँने वित्तिकै श्रीमतीले उनको डिपेन्डेन्ट भिसा रद्द गरिदिएको खुल्न आएको छ । सन्तोष एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन, यस्ता घ ट ना ह रु लगातार बढ्दै गइरहेका छन् लालचले गर्दा नक्कली विवाह गरेर विदेशमा पुग्नेहरु कुना बसेर रुनु भन्दा अर्को कुनै विकल्प नै रहँदैन ।
रीमानले बिजोक बनाएर छाडेपछि सडकमा चप्पल बेचेर करोडपति अन्टी
बिस्तारै पैसा जम्मा भएपछि उनले अन्य पेसा गर्न थालिन र आज करोडौको घर जोडेकी छिन।२ सन्तानकि आमा समेत रहेकी नेत्रलाइ अहिले श्रीमानको निकै याद आउछ तर के गर्नु उनलाई कहिल्यै सम्झेनन उनका श्रीमानले।उल्टो धेरै गालि त् पिडा भोगेर बस्नु परेको थियो रे बिहे गरेको समयमा।हेरौ टिक टक बाट भाइरल भएकी यी दिदीको मन रूहाउने कहानी यस्ताे छ ।
२ महिना अघि मात्रै सिंगापुरेसंग बिबाहमा बाँधिएकि सोनिहाङमा लिम्बुको रहस्यमय मृत्यु
राजधानी लगायत देशैभर फेरि आज एकाएक यति धेरै सँख्यामा थपियो काेराेना संक्रमित!